Nahum 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
“Kurow a ehwie mogya gu, due!” (1-19)
Nea enti a wɔde atemmu reba Niniwe so (1-7)
Niniwe bɛhwe ase te sɛ No-Amon (8-12)
Ɔkwan biara so Niniwe bɛhwe ase (13-19)
3 Kurow a ehwie mogya gu, due! Nnaadaa ne korɔnbɔ ahyɛ no ma. Daa ɔfom nneɛma. 2 Apɔnkɔ abaa ne nteaseɛnam nan ase gyigye wɔ hɔ;Apɔnkɔ a wɔretu mmirika denneennen ne nteaseɛnam a ɛrehuruhuruw ba. 3 Ɔpɔnkɔsotefo abedu, sekan ano repa gya, na peaw ano repa yerɛwyerɛw;Nnipa pii awuwu, na afunu sum hɔ;Awufo no dodow nni ano. Nkurɔfo nan pempem afunu. 4 Ne nyinaa fi tuutuuni no aguamammɔ bebrebe no,Ɔbea nuonyamfo a ne ho yɛ fɛ, asumansɛm hemmaa no;Ɔno na ɔde n’aguamammɔ sum aman afiri na ɔde n’asumansɛm nya mmusua. 5 Asafo Yehowa aka sɛ: “Hwɛ, me ne wo* anya!+Mɛpagyaw w’ataade akodu wo ti;Mɛma amanaman ahu w’adagyaw,Na ahenni ahu w’animguase. 6 Mehwie nneɛma fĩ agu wo so,Megu w’anim ase pɔtɔɔ,Na nkurɔfo ahwɛ wo asua nyansa.+ 7 Obiara a obehu wo no beguan afi wo ho+ na waka sɛ,‘Niniwe abɔ! Hena na obegyam no?’ Ɛhe na menya awerɛkyekyefo ama wo? 8 No-Amon*+ a ɛwɔ Nil asuasu ho+ no, wokyɛn no anaa? Ɔno na na nsu atwa ne ho ahyia;Ɛpo na na ɛyɛ n’ahode; ɛpo na na ɛyɛ n’afasu. 9 Etiopia ne Egypt hɔ na onyaa ahoɔden a enni ano. Put+ ne Libiafo nso boaa wo.+ 10 Ne nyinaa akyi, wɔkyeree no kɔe;Wɔde no kɔɔ obi man so.+ Ne mma nso, wɔtetew wɔn mu wɔ mmɔnten so baabiara. Wɔbɔɔ ne mmarima anuonyamfo so ntonto,Na wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn guu n’atitiriw nyinaa. 11 Wo nso wobɛbow nsã,+Na wubeguan akɔtɛw. Na wo tamfo hɔ na wobɛhwehwɛ guankɔbea. 12 W’abannennen nyinaa te sɛ borɔdɔma aba a edi kan;Sɛ wɔwosow a, ɛporow gu adifo anom. 13 Hwɛ, wo dɔm bɛdan mmea. Wobebue w’asaase apon ato hɔ ama w’atamfo. Ogya bɛhyew nnade a ɛbrambram w’apon akyi no. 14 Fa nsu sie ma da a wɔbɛka mo ahyem no.+ Hyɛ w’abannennen mu den. Kɔ atɛkyɛ mu na kɔwɔw dɔte,Na so ade a wɔde twa birikisi mu. 15 Ɛhɔ mpo ogya bɛhyew wo. Na sekan bedi wo nam.+ Ɛbɛsɛe wo te sɛ nea ntutummɛ sɛe ade.+ Ma wo dodow nnɔɔso sɛ ntutummɛ mma; Ampa, ma wo dodow nnɔɔso sɛ ntutummɛ. 16 Woama w’aguadifo adɔɔso asen ɔsoro nsoromma. Ntutummɛ mma worɔw wɔn ho gu hɔ, na wotu kɔ. 17 W’awɛmfo te sɛ ntutummɛ,Na wo mpanyimfo te sɛ ntutummɛ manyamanya. Wɔtetare ban ho awɔw da,Nanso owia bɔ pɛ na wɔatu kɔ,Na obiara nhu baabi a wɔwɔ bio. 18 O Asiria hene, wo nguanhwɛfo retɔ nko;W’atumfo adwudwo wɔn ho wɔ wɔn atenae. Wo manfo ahwete wɔ mmepɔw so,Na obiara nni hɔ a ɔbɛboaboa wɔn ano.+ 19 Worennya ahotɔ biara wɔ w’amanehunu mu. Wo kuru renwu da. Wɔn a wɔbɛte wo ho nsɛm nyinaa bɛbɔ wɔn nsam;+Efisɛ atirimɔdensɛm a wode dii nkurɔfo daa no, hena na woamfa bi anni no?”+
^ Kyerɛ sɛ, Thebes.